Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada Jamhadda Suuriya ee Maraykanku Taageero oo Go’doomiyay Raqqa.
Ciidamada Jamhadda Suuriya ee Maraykanku Taageero oo Go’doomiyay Raqqa.
Ciidamada Suuriyaanka ah ee dalka Maraykanku taageero ayaa sheegay in ay qabsadeen waddadii u dambeysay ee gasha magaalada Raqqa ee dalka Suuriya, taas oo ka dhigaysa in magaaladu ay go’doonsan tahay.
Magaalada Raqqa ee dalka Suuriya ayaa ahayd xarunta ugu wayn ee ururka la baxay Dowladda Islaamka ee Daacish, waana halka ay deganyihiin ciidamada ajaanibta ah ee ugu badan ee u dagaalanta Daacish. Ciidamada Jamhadda Dimuqraadiga ee Suuriya (SDF) ayaa muddooyinkii danbe dagaalo xooggan kula galay ururka ISIS magaalooyinka ku dhaw Raqqa ee dhaca webiga Furaat, waxaana dhanka cirka ka teegeeraayey diyaaradaha xulafada Maraykanka.
Afhayeenka Xulafada Maraykanka Joe Scrocca ayaa sheegay in Jamhadda SDF ay ku socotey si xawli ah haddana ay maamuleyso dhamaan waddooyinka gala Raqqa. Rami Abdelrahman oo ka tirsan hay’adaha dusha kala socda arrimaha Suuriya ayaa sheegay in ISIS xalka u furan uu yahay keliya in ay dagaalamaan.
Magaalada Raqqa ayaa waxaa sugaya burburkii ku dhacay magaalada qadiimka ah ee Muusil ee dalka Ciraaq ee ISIS ay ku xooganaayeen, taas oo hadda noqotey Xalab-tii labaad, waxaana dagaaladaas ku burburey dhismayaal jirey tan iyo qarnigii 12aad.